အမြင့်ခါးအထိအကျီမပါချည်ထိုးအကန့်ပုံနှိပ်ထားသော Maxi Sundress - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်မဆောင်ပါ WoopShop®
ခါးသည်အမြင့်ခါးအထိချည်ပြီးအစက်ကို Maxi Sundress လုပ်သည်
$28.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $46.99
အရောင် အနီရောငျ အဖြူ အစိမ်းဖျော့ရောင်
အနီရောင် / M က အနီရောင် / S က အနီရောင် / XL အနီရောင် / L ကို အဖြူ / M က အဖြူ / S က အဖြူ / XL အဖြူ / L ကို အစိမ်းရောင် / M အစိမ်းရောင် / S အစိမ်းရောင် / XL အစိမ်းရောင် / L
အမြင့်ခါးအထိအ ၀ တ်ထည်အစက်ပါအမြင့်မက်စ်ဖိနပ် - အနီ / မီတာ backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
pattern အမျိုးအစား: Dot
မှတ်ချက်။ ထုတ်လုပ်မှုကွဲပြားသောအသုတ်ကွဲမှုများကြောင့် ၁-၃ စင်တီမီတာအကွာအဝေးရှိနိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးနားလည်ပြီးခွင့်ပြုပါ။ အရွယ်အစားသည်အာရှအရွယ်ဖြစ်ပြီးရုရှား၊ ဥရောပနှင့်အမေရိကန်အရွယ်အစားနှင့်မတူပါ။ အကယ်၍ သင်သည်အရွယ်အစားကိုမအတည်ပြုနိုင်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ၊ သင့်အတွက်သင့်တော်မည့်အရွယ်ကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပေးပါလိမ့်မည်။ (၁ လက်မ = ၂.၅၄ စင်တီမီတာ)
အလွန်တော်တော်လေး sukirnka ။ ကောင်းပြီချစ်ပ် tandetnie မကြည့်ပါဘူး, ပစ္စည်းအနည်းငယ်အတုပေမယ့်ဒါကောင်းပါတယ်။ အရွယ်အစားသေးငယ်ယူအကြံပြုပါသည်
ငါစက်တင်ဘာလ 12 ရက်နေ့တွင်အမိန့်လုပ်။ , စားဆင်ယင်အောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့တွင်လာ။ fectုံချုပ်, ထည်ကောင်းသည်, သိပ်သည်း။ သတ်မှတ်ချက်များတွင် - အမြင့် 157, 55 kg, 82:70:95 အမိန့်အရွယ်အစား s ။ ဒီဝတ်စုံကအဆင်သင့်ထိုင်ပြီးရင်ဘတ်သေးသေးလေးဖြစ်ရင် ၄၄၊ ၄၆ အရွယ်ပဲရှိလိမ့်မယ်။ ရင်ဘတ်ထဲမှာအခန်းတစ်ခန်းရှိနေသေးတယ်
အဆိုပါစားဆင်ယင်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပါ! အရည်အသွေး, ချုပ်, ကိုယ်ခန္ဓာမှသာယာသော။ ပေးပို့မြန်! + လက်ဆောင်, ဆံပင် elastic, ကောင်းတဲ့) ငါအကြံပြု !!!
အဝတ်အစားလှလှလေး! အရာအားလုံးအရွယ်အစားသို့ရောက်ကြ၏, ချုပ်ရိုးပင်ဖြစ်ကြသည်။ အကြံပြုပါသည်